Ostermarsch 2018 na Braunschweig … | Portal │ Hans Kottke
The Braunschweig na ya “Schloss”… »
Ostermarsch 2018 na Braunschweig …
Egwu A NEW AGHA ỤWA?
Kama nke na-akwalite udo usoro na Syria na-US na Israel nke iwu mba ọgụ megide mba dị ka Turkey na ya ọgụ megide Kurdish ebe gburugburu Afrin. N'agbanyeghị na-eru okwu banyere ngwá agha nuklia nke North Korea a mgbagwoju esemokwu n'etiti US na North Korea bụ ka ukwuu na-ize ndụ. Gọọmenti etiti nwere ọ bụghị nanị agha na Baltics: bu n'obi site oruru nke ọzọ NATO n'isi ụlọ ọrụ ngwa ngwa redeployment nke agha na Russian ókè-ala-ekwe omume. Anyị ikpe agha arụmọrụ na sanctions iwu na agha ihapu otutu okwu na-akpọ maka a udo mkpebi nke esemokwu.
WHO na ogwe aka na-ebupụ akwalite WAR ma gbalaga! Germany abawanyele ya na ogwe aka na-ebupụ ọzọ. Ha wee u. a. na Saudi Arabia, a mba, oké mkpa-akpata mmụba agha Syria na Yemen. Turkish ọgụ na Afrin ike mụụrụ na German agụ owuru tankị na obere ogwe aka.
ọgụ na-akpata nke ụgbọ elu pụtakwara: Kwụsị ogwe aka na-ebupụ!
Ọgụ Drones mmachibido iwu!
The Bundeswehr akpọ maka zuo nke ọgụ drones. US drones na-achịkwa site na Germany, site na ịpị a button na-egbu egbu shot chụọ n'ọrụ. Nke a ngwa na-ezubere iche na-egbu ndị mmadụ n'ime na n'èzí agha, enweghị ụgwọ, Usoro na ikpe.
Nke ahụ bụ igbu ọchụ, na na ọ bụ ihe megidere iwu mba!
IHE A ngwá agha nuklia-FREE ỤWA!
Anyị na-akpọ na Federal Government, akpatre ndọrọ ego nke ngwá agha nuklia si Büchel (Rheinland-Pfalz) na-amanye ha, ya mere ka ọ ghara ikwe ọhụrụ nke nuclear warheads site United States. Gọọmenti etiti kwesịrị akpatre isonyere UN nuclear ban!
NO ntọt nke ogwe aka okodu!
The ọhụrụ GroKo chọrọ iji kwalite na dictates nke NATO achị, ihe agha mmefu nke 2% nke GDP oku. Anyị na-ajụ a. The ego na-eji maka muta na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na ụlọ, nke na-akwalite esịtidem na udo zuru ụwa ọnụ.
Udo Nkwado na-elekọta mmadụ na Ngwuputa ụzọ ọpụpụ!
Anyị na-adịghị mkpa EU agha, ma a obodo na-elekọta mmadụ Europe, na nnapu mgwoagha, obodo ogu, aku na uba na ịdị n'otu, Cosmopolitanism na n'ikuku na mwekota nke gbara ọsọ ndụ bụ!
This entry was posted on Saturday, March 31st, 2018 na 17:07 site Hans Kottke na a gbara akwụkwọ n'okpuru 2018, ugbu a, n'ozuzu, Braunschweig, Video. I nwere ike iso ihe ọ bụla Ibọrọ a na ntinye site na RSS 2.0 fiidi. Ị nwere ike ahapụ a nzaghachi, ma ọ bụ sochie site na gị onwe gị na saịtị.
XHTML: Ị nwere ike iji ndị a na mkpado:
26 ọrụ online
Site ọdịnaya: ©2018 Portal │ Hans Kottke
Mon Jun 17th 16:44:59 UTC 2019